ठेकेदार अधिकारीले सडक नबनाएपछि सुनाकोठीमा आइतबारदेखि फेरि बन्द :: Setopati
ठेकेदार अधिकारीले सडक नबनाएपछि सुनाकोठीमा आइतबारदेखि फेरि बन्द अधिकारीको खुमलटारस्थित घरमा प्रचण्ड, सुनाकोठीमा खानेपानी मन्त्री बिना मगर बस्छिन्
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, कात्तिक १५
सडक नबनेपछि अवरोध गर्दै सुनाकोठीका स्थानीय। तस्बिर: सेतोपाटी
ललितपुर महानगरपालिका-२७ नम्बर वडाको सुनाकोठी क्षेत्र अहिले धुलाम्य त छ नै, बाटोमा ठूला-ठूला खाल्डा पनि।
स्थानीयका अनुसार यस्तो बाटोका कारण आवागमन असहज छ, जनताको स्वास्थ्य नै बिग्रिन थालेको छ।
वडाध्यक्ष बाबुराजा महर्जनका अनुसार यो बाटो कान्ति लोकपथ अन्तर्गत हो। ललितपुर महानगरपालिका-२७ को सुनाकोठीमा मात्र पर्ने बिग्रिएको बाटोको क्षेत्रफल करिब दुई किलोमिटर छ।
ठेकेदार कम्पनी र सडक विभागबीच यो बाटो २२ मिटर चौडा पार्ने सम्झौता छ। अहिले उक्त बाटो ८ मिटर चौडाको हो।
महर्जनका अनुसार तत्कालै २२ मिटर फराकिलो पार्न नसकिए पनि ८ मिटर चौडामा रहेको अहिलेको बाटोलाई मर्मत गरेर जनजीवन सहज पार्न ठेकेदार कम्पनीलाई अनुरोध कति गरियो, गरियो। ठेकेदारले दसैंसम्ममा बाटो पिच गरेर आवागमन सहज पारिदिने बचन दिएका थिए।
‘तर, दसैं सकियो। बाटोमा ठेकेदारको मुख देख्न पाएको छैन,’ बाबुराजाले भने।
बाटो बन्द छ: सुनाकोठीका युवा सडक नबनेपछि विरोध गर्दै।
ठेकेदार ‘हराए‘पछि अहिले स्थानीयले आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेर बाटो बनाउन दबाब दिनु परेको छ।
यो बाटो बनाउने जिम्मा शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हो। उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर शारदाप्रसाद अधिकारी हुन्। उनी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी हुन्।
अधिकारीको सुनाकोठीस्थित सिभिल्स होमको कोलोनीमा अर्को घर पनि छ। त्यहाँ खानेपानी मन्त्री बिना मगर बस्छिन्।
मगर प्राय:जसो प्रचण्डसँगै खुमलटारमा बस्ने भए पनि साताको एक-दुईपटक सुनाकोठी जान्छिन्।
ठेकेदार अधिकारीले बाटो नबनाएको विरोधमा आइतबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको त्यसक्षेत्रका स्थानीयले सेतोपाटीलाई बताए।
निरज महर्जन सुनाकोठीको नेवाज क्लबका अध्यक्ष हुन्। उनले असार महिनादेखि नै ठेकेदारलाई बाटो बनाउन दबाब दिँदै आएको बताए।
सुनाकोठीको सडकमा गुडिरहेका सवारी।
‘असारमै एक दुई दिन बाटो बन्द गर्‍यौं। त्यसपछि बाटो कालोपत्रे गर्ने सर्त भयो। ठेकेदारले देखावटीको लागि केही दिन काम गर्‍यो,’ उनले भने।
उनका अनुसार वडाध्यक्ष र प्रदेश सभा सांसद सम्मिलित बैठकले दबाब दिएपछि शैलुङ कम्पनीले असोज १ गतेदेखि बाटो कालोपत्रे सुरू गर्ने बचन दिएको थियो।
तर, दसैं बित्यो तर, बचन पूरा भएन।
‘ठेकेदारले काम छोडिहाल्यो, त्यसपछि वायुप्रदुषण बढ्यो, हामीले वायुप्रदुषण रोक्न पैसा उठाएर बाटोमा पानी हाल्ने काम गरिरह्यौं,’ नेवाज क्लबका अध्यक्ष निरजले भने, ‘यसरी कति दिन पानी हालेर बस्ने? निर्णायक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने भयो, हामी आन्दोलनमा छौं। बाटो नबनेसम्म हामी रोकिन्नौं।’
बर्खामा हिलाम्य भएको बाटो छिचिल्दै महिला।
उनका अनुसार स्थानीयले आइतबार बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म बाटोमा आवागमन बन्द गर्ने भएका छन्।
विरोधका कार्यक्रम धेरै छन्। उनका अनुसार उक्त समयमा ठेकेदार आए बाटोको काम मात्र गर्ने, नआए पनि विरोध र दबाबस्वरुप बाटो बन्द नै राख्ने निर्णय स्थानीयको छ।
‘विरोध शैली रहरले नभएर विवशताले हो, स्थानीयले ठेकेदार काम गर्न नआएसम्म र आएपछि पनि काम नसकिएसम्म बन्दलाई जारी राख्ने भएका छन्,’ उनले भने।
ठेकेदारले पटक-पटक बचन दिने, सहमति गर्ने तर काम पूरा नगर्ने भएपछि यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको आन्दोलनको अगुवाइ गरेका महर्जनले बताए।
स्थानीयले यो बाटो बनाउने जिम्मा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अधिकारीको भएको र उनको घरमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्दै आएकाले अधिकारीमाथि कारबाही नभएको बताएका छन्। दाहालको घरमा बसेकै आधारमा ठेकेदारले बाटो बनाउन ढिला गरेको आरोप स्थानीयको छ।
‘यो बाटोमा धुलोको कारण स्थानीय बिरामी नै भएका छन्, कोभिडको बेला श्वासप्रश्वासमा समस्या छ, यो धुलोकै कारण थप क्षति पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको जिम्मेवारी कसले लिने? प्रचण्ड, बिना कि शारदाले?’
धुलो कम गर्नको लागि वडातर्फबाट दिनहुँ दुई ट्यांकर पानी हाल्नका लागि चार हजार खर्च भइरहेको र यो पैसा जनताले उठाइरहेको वडाध्यक्षले बाबुकाजीले बताए।
‘बिना मगरजी आइरहनुहुन्छ, उहाँका स-परिवार यहाँ बस्छन्, देख्नुभएको होला यो बाटोको हविगत,’ वडाध्यक्ष बाबुबाजीले भने, ‘उहाँहरूलाई सजिलै लागेको छ कि!’
आर्थिक अभावले यो बाटोमा दैनिक पानी हाल्ने खर्च धान्न वडाबाट सम्भव नरहेको उनले बताए। ‘ठेक्का लिनेबेला हामीलाई सोधिन्न, सबै काम माथिबाट हुन्छ, यहाँका जनतालाई मैले के भन्नु?,’ वडाध्यक्ष महर्जनले प्रश्न गरे।
सुनाकोठीमा सामान्य वर्षा हुँदा बनेको खाल्डो।
आन्दोलन गर्दा पनि ठेकेदार नआए कडा कदम चाल्न यहाँका बासिन्दा विवश हुने क्लबका अध्यक्ष महर्जनले बताए। तर, ठेकेदार काम गर्न आएर दिनहुँ १० देखि ५ बजेसम्म काम गरे एक हप्तामा आन्दोलनलाई सहज बनाउने महर्जनले जनाए।
वडाध्यक्ष बाबुकाजीका अनुसार कान्ति लोकपथ अन्तर्गतको यो बाटो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपूर्व नै ठेक्का लागेको थियो।
‘कति किलोमिटर, कति बाटो बनाउनुपर्ने हो, मैले सडक विभागमा जानकारी लिँदा त्यो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलेकै ठेक्का सम्झौता रहेछ,’ बाबुकाजीले भने, ‘हामी काम गर्न थालेकै तीन वर्ष भइसक्यो, यो बाटो बन्ने कहिले हो भनेर मैले जनतालाई भन्न सकेको छैन।’
‘असोज १५ गते अधिकारीलाई सँगै राखेर दसैंसम्ममा बाटो बनाउन अनुरोध गर्‍यौं,’ वडाध्यक्ष महर्जनले भने, ‘मैले त पत्र नै दिएँ, त्यसपछि चार-पाँच दिन काम पनि गर्नुभयो। त्यसपछि काम रोकियो। किन भनेर प्रश्न गर्दा मिसिन बिग्रियो भन्नुभयो।’
दसैंसम्ममा बाटो बन्ला भनेर पर्खिएका जनता ठेकेदारको यही भनाइले निराश बनाएको उनले बताए।
‘बाटोमा खाल्डैखाल्डा छन्, धुलोको वादल लाग्न थाल्यो, जनता वडामा आए, मैले जनतासँगै सहयोग उठाएर बाटोमा पानी हालेँ,’ उनले भने, ‘तर, पनि ठेकेदारले फर्केर हेरेनन्, अब आन्दोलन नगरी, बाटो बन्द नगरी काम हुँदैन भन्ने लागेर जनताले यस्तो निर्णय गरे।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १५, २०७७, ११:५८:००